ဘာ့ကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချသင့်သလဲ?
အဝလွန်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းသည် ကျန်မာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားအဝမလွန်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် (၆၅)နှစ် အထက်ရှိသော လူကြီးပေါင်း ၂၇% နီးပါးသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသည်ကို သင်သိပါသလား? တကယ်တော့ ၆ လတာကာလအတွင်း သူတို့အလေးချိန်ရဲ့ ၅% နှင့် ထို့အထက် ပို၍ ကျဆင်းခြင်းသည် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သေချာအလေးထားသင့်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်များ၊ စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို ကိုယ်အလေးချိန်လျှင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာပါက အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန် ဆေးကုသမှုခံယူခိုင်းပြီး ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက် ရပါမယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းအရာများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လှုပ်ရှားမှုနည်းလာပြီး တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်ပိုများ လာပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများရဲ့သေဆုံးမှုများနဲ့အတူ ၎င်းတို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသည်လည်း သေးငယ်လာပါတယ်။ အဲ့အရာကပဲအထီးကျန်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို တိုးလာစေပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါဝင်တဲ့အခါမှာ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် အချို့မှာအစာစားမှုနည်းပြီး အချို့မှာ လုံးဝမစားတော့ပါ။ စိတ်ကျခြင်းအတွက် ကုသရန်နည်းလမ်းကတော့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်စေခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အပြန်အလှန်စကားပြောပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောကုထုံးသည်လည်း ၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ နေ့စဉ်လူမှုဘဝ လှုပ်ရှားမှုများလျော့နည်းလာခြင်း
အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ လူတစ်ယောက်ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုများပြောင်းလဲလာတာကြောင့် လုပ်နိုင်စွမ်းများလျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ကားမောင်းတာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာ၊ အားကစားလုပ်တာ၊ ဟင်းချက်တာနဲ့ ပိုအရေးကြီးတာက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်နေရတာက တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့် ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်အရောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေ လိုအပ်တာပါ။ ဈေးဝယ်ထွက်ချိန်ပေးခြင်း၊ ဟင်းချက်ပေးခြင်း၊ မီးဖိုချောင်အတွင်း အာဟာရဖြစ်စေမည့် သရေစာများ ထည့်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ် မျှတစွာထောက်ပံ့ခြင်းတို့ဖြင့် အလေးချိန်လျော့ကျမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၃။ နာတာရှည် ရောဂါ
နာတာရှည် ရောဂါသည် စိတ်ဖောက်ရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါတို့လို ဝေဒနာရှင်၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ကင်ဆာရောဂါ၌ ကိုယ်အလေးချိန်သည်၂၄ % – ၃၈% ကျဆင်းနိုင်သည်။ စိတ်ဖောက်ရောဂါရှိသော သက်ကြီးရွယ်အိုတို့တွင် အနံ့နှင့် အရသာ ခံစားနိုင်မှု ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထပ်လောင်းပြောရလျှင် အင်ဆူလင်ဓာတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ဆီးချိုရောဂါသည်တို့တွင် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ အလွန်အမင်း ရေဆာခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ယခုလို လက္ခဏာများ မြင်တွေ့ရလျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူခြင်းက ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေသည့် အကြောင်းအရာများကိုပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေသည်။ ပါရဂူသည် မိသားစုဝင်များ၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း သမိုင်း၊ သွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် စကင်ဖတ်ခြင်း၊ ပြင်ပရောဂါ စစ်ဆေးခြင်းများကိုပါ အကြံပေးနိုင်သည်။
အသက်ရလာသူများတွင် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုများကို လှစ်လျူမရှုသင့်ဘဲ သေသေချာချာ အလေးထား၍ ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။
အသက် (၄၀) နောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှု : အသုံးချမလား (သို့) အဆုံးရှုံးခံမလား
အသက် (၄၀) ရောက်တာနဲ့ ကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေနဲ့အတူ အဓိကကျတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုလည်း ချမှတ်ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲများနှင့် ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရခြင်းကြောင့် အစားသေချာစားရန်နှင့် ကျန်းမာရေး ပုံမှန်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အသက် (၄၀) အရွယ် သန်စွမ်းမှုနှင့် အသက် (၂၀) အရွယ် သန်စွမ်းမှုလည်း ကွာခြားလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက် (၅၀) (၆၀) အရွယ်မှာ ကြွက်သားသန်မာဖို့အတွက် အသက် (၄၀) အရွယ်ကတည်းက သင့်တော်သောအစားအစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အသက် (၄၀) နောက်ပိုင်းကြွက်သားများတည်ဆောက်ခြင်း : အကျိုးကျေးဇူးများ
ကျန်းမာသည့် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါသည်။ အိုမင်းခြင်းကိုလည်း ရပ်တန့်၍ မရနိုင်သော်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက အိုမင်းခြင်းကို နှေးစေသည့် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းတွေကို အောက်တွင်လမ်းညွှန်ပေးထားပါသည်။
၁။ ပထမဦးဆုံးက အစားအသောက်ပါ။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝဖြစ်စဉ်များလည်း နှေးကွေးလာပါသည်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်ကို ရွေးချယ်စားသုံးခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့် အလေ့အကျင့်ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်း ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကယ်လိုရီကိုလျော့ချဖို့မလိုအပ်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းစေမယ့် အစားအစာများကို လုံလုံလောက်လောက် စားသုံးပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကိုလက်စထရော ပါသည့် အစာများနှင့် အသင့်စား အစားအစာများ စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစားအစာ စားသောက်ရာ၌ အသီးအရွက်၊ အခွံမာသီးများနှင့် ပဲများကို စားသုံးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် လူငယ်များကဲ့သို့ GYM သွားပြီးအလေးမခြင်းများပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ သင့်အိမ် မှာပဲ သက်တောင့် သက်သာဖြစ်‌စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အလေးမပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတစ်ခုထဲကပဲ ကြွက်သားများကို တက်စေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပေါ့ပါးပြီးကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည့် အလေးပေါ့များကိုမပြီး ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ခြင်းကလည်း ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းကို အပြင်းအထန်လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ဒဏ်ရာရလို့ရပ်တန့်လိုက်ရခြင်းထက် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းက သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းကို အများအားဖြင့်မေ့တတ်ကြပါသည်။ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အကြောလျှော့ခြင်းသည် မတူညီပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ ကြွက်သားများနိုးထလာရန် အရင်လိုအပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသည့်အခါတွင်လည်း အကြောလျှော့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသက်(၄၀) ကျော်အရွယ်များအတွက် ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်ခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကြောလျှော့ခြင်းကလည်း အလွန်အ‌ရေးကြီးပါသည်။ အကြောလျှော့ခြင်းက လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်း ကြွက်သားများကို လျော့ချပေးရာမှာ ကူညီပေးပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် အရွယ်ရောက်လာခြင်းက မိမိကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်းအောင်၊ ကျန်းမာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့ ဆင်ခြေမဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းသေချာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ ကြွက်သားတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
ဦးနှောက်သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အချက်ကတော့ စွမ်းအင်အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်စုစုပေါင်းရဲ့ ၂% လောက်သာရှိပေမယ့် စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုကတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစာရဲ့ ၂၀% လောက်အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့အစာအဟာရ ကိုစားသောက်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဦးနှောက်သည် စားသောက်လိုက်တဲ့ အစာအဟာရတွေကို စုပ်ယူသောကြောင့် ရေမြှုပ်တစ်ခုနဲ့လည်းတူပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးနှောက်သည် ၂၄ နာရီ /၇ ရက် မနားတမ်းအလုပ်လုပ်နေတာကြောင့် အာဟာရဓာတ်အထောက်အပံ့အားလုံးကိုလိုအပ်ပါတယ်။
လည်ပတ်နေတဲ့အာရုံကြောစနစ်သည် လူတစ်ဦးရဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင်စီ၊ ဖောရစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင်ကေ နဲ့ ဗီတာမင်ဘီတို့ပေါ်တွင်မှီခိုနေပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြောရရင် “ဘီ” သည်ဦးနှောက်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင်ဘီ 12 သည် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးအာဟာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပြု ချက်တွေအရ ဗီတာမင်ဘီ 12 ချို့တဲ့မှုနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကြားမှာ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူငယ်များသည် ဗီတာမင်ဘီ 12 ကို စားသောက်လိုက်တဲ့အစားစားများမှ ရရှိသော်လည်း အချို့သောသူများ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသောသက်ကြီးရွယ်အိုများမှာ B12 ချို့တဲ့ခြင်း ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းခန္ဓာကိုယ်သည် စားလိုက်သည့်အစားအစာများမှ B 12 ကို စုပ်ယူရန်အခက်အခဲရှိလာတာကြောင့် ၎င်းတို့ရဲ့ ဦးနှောက်သည်လည်း အာဟာရချို့တဲ့မှုကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ဖျားနေသောလူများနှင့် နာလန်ထခါစ လူကြီးများသည် ၎င်းတို့ခန္ဓာကိုယ် တွင်လိုအပ်သည့်အာဟာရဓာတ်များရရှိနိုင်ရန်အတွက် စားသုံးသည့်အစားအစာတွင် ဗီတာမင်ဘီများ များစွာလိုအပ်ပါတယ်။
သင်နဲ့သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ ဗီတာမင်ဘီစားသုံးမှုကို ဖြည့်ပေးချင်ရင်တော့ ၈ အောင်စရှိတဲ့ Ensure ပုလင်းမှာ ဗီတာမင်ဘီနှင့် ဖောလစ်တို့ ၂၅% ပါဝင်တာကြောင့် Ensure ကိုတိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Ensure မှာ ပြည့်ဝပြီး မျှတသောအာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။